Iri nke kasị mma ngwa ọdịnala na-eme gị Christmas shopping - News Ọchịchị
Iri nke kasị mma ngwa ọdịnala na-eme gị Christmas shopping
Isiokwu a na-akpọ “Iri nke kasị mma ngwa ọdịnala na-eme gị Christmas shopping” e dere site Stuart Dredge, n'ihi na theguardian.com on Saturday 28th November 2015 07.00 UTC
Ọ bụghị na ọtụtụ afọ ebe ọ bụ na echiche nke zụọ ahịa na ekwentị gị - ma ọ bụ "m-azụmahịa" dị ka jargon nke oge na-etinye ya - e asak site ọtụtụ ndị ọkachamara. Ònye ga-ịzụta stof site na obere ngwaọrụ ha akpa? Dị ka ọ na-enyo, nza nke ndị mmadụ.
Smartphones na mbadamba nwere ike mgbe kpamkpam eji dochie ajọ hell visceral obi ụtọ nwa nke barging ụzọ gị gburugburu jupụtara elu-n'okporo ámá na-echekwa na 17 akpa ke ubọk, ma na a bit nke atụmatụ, gị mobile ngwaọrụ ike zọọ unu ọrụ ike.
Dị ka 2015 si Christmas shopping oge odụk zuru siwing, ebe a bụ ụfọdụ n'ime ndị kacha mma ngwa ọdịnala na chọgharịa ma zụta onyinye maka gị kacha nso, gị dearest, na gị siri nnọọ a maara ọrụ ndị ọrụ ibe gị na-adọrọ mmasị na Nzuzo Santa.
Amazon dịwo anya a aga na-ọrụ n'ihi na Christmas shopping, ekele ya Wishlist feature, -atụ aro na reviews, na - ma ọ bụrụ na ị na-akwụ maka ya Prime ndenye aha - ngwa ngwa mbupu maka ikpeazụ-nkeji egwu ekedep mgbe onye amara nwanne mama ma ọ bụ abụọ gosiri maka Christmas nri ehihie.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe leftfield onyinye maka ndị ị na-eche banyere, otu awa ma ọ bụ abụọ nchọgharị Etsy pụrụ ịba ọtụtụ possibles. Ya na-elekwasị anya "ejiri mee, Devid agụghị ndị gbara na ihe "na ngwaahịa pụtara na ị ga-ahụ onyinye gabiga ihe unu na-ahụ nnukwu agbụ ígwè na-echekwa - ọ bụ ezie na n'ihi ihe mbupu si esenidụt, ị ga-achọ ịtụ n'oge.
Pinterest bụ a shopping ngwa na ọtụtụ akụkụ nke ụwa, ma, ọ bụ ezie na US ya ka ẹkenam "Buyable mkpọ" ịzụta ngwaahịa n'ime ngwa. N'ihi na onye ọ bụla ọzọ, Pinterest bụ n'ụzọ magburu onwe ya na-agagharị na echiche - onyinye gụnyere - na-azọpụta ndị kacha mma ka gị onwe gị mbadamba ihe e zoro n'oge tupu Christmas oge. I nwekwara ike iji ngwa ahụ tụgide photos nke ngwaahịa na ị na-ahụ mgbe na-awagharị awagharị real-ụwa ụlọ ahịa.
Depop anọdụ n'akụkụ Etsy dị ka a mma isi iyi nke ọzọ na-akpali ma na pụrụ iche onyinye, na a skew kwupụta imewe, Devid agụghị ndị gbara ejiji, vinyl na trainers. Ọ bụ a ọma eche eche ngwa ezie na, na chat - site comments na kpọmkwem ozi - a akụkụ dị mkpa nke na-ekpebi ihe ị chọrọ ịzụ. I nwekwara ike iji ya dị ka a na-ere ákwà, ma ọ bụrụ na ị nwetara na akụ ịgbanwee na dabara ya kee ihe ethos.
A Christmas shopping roundup gaghị ezu na-enweghị eBay, nke na-arụ ọrụ n'ụzọ siri na ya mobile ngwa ọdịnala na-adịbeghị anya iji mee ka ha dị ka ngwa ngwa na mfe dị ka o kwere. Edebe taabụ na ihe ị na-Bidding na ọrụ ọma site ngwa si Ịma Ọkwa atụmatụ, mgbe ya barcode-scanning feature-anọgide bara uru maka ịlele eBay ego maka ihe ị na-ahụ na anụ ahụ ụlọ ahịa.
Onyinye Finder site Ọ bụghị On The High Street
Ọzọ nhọrọ maka onye ọ bụla chọrọ elekwasị anya naanị doro anya onyinye a Christmas. One of Onyinye Finder kasị bara uru atụmatụ bụ inwe ike akuakuzinwo ala n'ime ya na ngwaahịa dị ka gị ego na nnabata: ọmụmaatụ, a search maka £ 50- £ 100 onyinye maka a nwoke ulo-mpako "style akara ngosi" na-ewepụta ihe necklaces, satchels, cufflink igbe dị iche iche Mbipụta.
Maa mma shopping ngwa ekere òkè aha ya na-Iggy Azalea song, ma otu nke slickest ụzọ na-agagharị, ịkọrọ na ịzụta onyinye. Ndị na-elekọta mmewere bụ nnukwu akụkụ nke Fancy: dị ka on Pinterest, ị na-ewu gị onwe gị collections nke ngwaahịa na-enyi na-ahụ. Note, ndabara ego bụ dollars, ma i nwere ike ịgbanwe na pound na mmasị, na Ndepụta na-egosi ma ngwaahịa ụgbọ mmiri na UK.
Kere ma ọ bụrụ Sean Connery ewepụwo Captain Kirk ọrụ na Star mee njem ahụ… -Adịghị ike njakịrị banyere aha ya wezuga onwe-, Schpock kwesịrị nnọọ a virtual rootle na ọsọ-ruo Christmas. The ngwa na uwe ya dị ka a "buut ire ere na Ọkwa Ngwaahịa ngwa", onye mesiri ike na n'ihe mmadụ ngwongwo na ige si n'ụlọ na ubi ma ọ bụ nwa na nwa na-atụrụ ndụ na egwuregwu. Ọ na-nwere a local-elekwasị anya: pụta ìhè na ngwaahịa gị nso ma nye ike na-ajụ ajụjụ ma ọ bụ mee onwe-enye.
Geek - echeta Ịzụ ahịa
Part nke a ibu ezinụlọ nke themed shopping ngwa ọdịnala site Mmepụta ContextLogic - Home ekpuchi imewe na ndozi, Mara mma na-ekpuchi mma na na - geek nwere ike ịbụ ihe kasị adọrọ adọrọ ma ọ bụrụ na ị na-a Yin maka technology. Mgbe ọ jụsịrị ihe na-amasị gị ịzụta, ya site na ị na a na ndepụta nke ngwaahịa na-ekwe nkwa ruo 80% discounts. Worth-elekwasị anya na maka ihe ọ bụla tech onyinye na ị na-atụle.
Brits, eh? Anyị na-karịa obi ụtọ na kwụ n'ahịrị na a na-ahụ ụlọ ahịa na-agụ a katalọgụ, dee nọmba ala na akwụkwọ na obere pencils, mgbe ahụ plonk onwe anyị ala na oche ruo mgbe anyị ọnụ ọgụgụ na-akpọ. Argos shopping, ọ bụ mma ikwu, bụ otu n'ime anyị na mba quirks. obi ụtọ na-, ndị na-ere ahịa si eji ngwa sidesteps ndị obim elewo: ị nwere ike ịme nchọgharị na mgbe ahụ ma idobere n'ihi na-ụlọ ahịa collection ma ọ bụ nnyefe. Ọ dịghị pencils chọrọ.
Ndị na-anyị aro, ma ihe ngwa ọdịnala nwere ị na-eji ịzụ ahịa online, na ị ga-ike ikwu na ọsọ-ruo Christmas? Ihe ngalaba bụ oghe maka echiche gị.
27976	0 Amazon.com, Apps, Nkeji edemede, Best android ngwa ọdịnala, Best iPhone na iPad ngwa ọdịnala, Christmas, E-Commerce, eBay, Atụmatụ, Internet, mobile igwe, Pinterest, Ịzụ ahịa njem, Smartphones, Stuart Dredge, Technology
← Ise siga elu-ike afọ nwere ike imebi akwara ozi ụbụrụ iPad Pro Review - okike n'ọdịnihu na-achọ ezi →